Maareeye iyo Nile Wigan oo ku kulmay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa maanta la kulmay Safiirka dhawaan xilka ka tegaya ee Britain u fadhiya Soomaaliya, Mr Neil Wigan.
Labada Mas’uul ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal, doorka UK ee Soomaaliya iyo sidii Warbaahinta dalka loo horumarin lahaa.
Wasiir Maareeye, ayaa uga mahadceliyey UK doorkooda hoggaamineed ee Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliya uga saacidaan dhanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey iyo caalamkaba. Wasiir Maareeye ayaa sidoo kale siiyey Safiirka UK warbixin ku aadan sida ay Dowladda Federaalka uga go’antahay dhaqangelinta hiigsiga 2016.
Wasiir Maareeye, ayaa sidoo kale warbixin ka siiyey Safiirka UK qorshaha Wasaaradda Warfaafinta iyo horumarka ay gaartay oo la diyaariyey Istraatejiyada Warbaahinta Dalka, Xeerka Saxaafada oo baarlamaanka horyaala, dadaalka Wasaaradda ee dhanka isku xirka iyo xiriirka hay’adaha Dowladda iyo horumarka laga sameeyey dib u yagleelida SONNA iyo SNTV iyo horumarka guud ee Warbaahinta.
Wasiirka ayaa ka codsaday UK inay kala shaqeyso sidii loo tayeyn lahaa Warbaahinta dalka oo dhan oo ay ku jiraan kuwa gaarka loo leeyahay iyo sidii loo horumarin lahaa dadaalada warbaahinta oo muhiim u ah hiigsiga 2016 sida wacyigelinta bulshada, afti u qaadida dastuurka, dhaqangelinta federaalka iyo dimoqraadiyeynta dalka.
Safiirka UK, ayaa ammaanay doorka wasaaradda iyo horumarka dalka uu sameynayo maalin walba sheegeyna in UK ay ka go’antahay sidii Soomaaliya loo gaarsiin lahaa nabad iyo barwaaqo.
Wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray Dhuusa Mareeb